लोकनाथलाइ आमा आकाशमा ताराहरुसंगै उसलाई हेरीरहेकी छन, बस यत्ती थाहा थियो उस्लाई। लोखनाथले गहिरो सोंचमा भन्यो,बा हामी पनि बजार जाने। म आज भैँसीको ओखतीलीन बजार जांदै छु,जाने भए मसंगै हिँड न त,उसका बाले उत्तर दिए। उत्तर के सकिएको थिएन,लोक नाथ कपडा लगाएर तयार भयो।
खाना खाइसके पछि लोक नाथ आफ्ना बाको हात समातेर बजार तिर लाग्यो। बजारको एउटा चोकमा केटा केटी झुम्मीरहेका थिए। लोकनाथका आंखा त्यतैतीर तानिए। केहीका हातमा बेलुन थिए भने केही बेलुन लिन
लाइनमा बसिराखेका थिए। बेलुनमा लेखिएको थियो,ह्याप्पी मदर्स डे। बा म पनि बेलुन किन्ने,लोक नाथले
आफ्नो कुरो राख्यो। केटाकेटी, के कुरा बुझ्ने त्यसले,उसले आमा गुमाएको दिन सम्झिँदै एक रुपियाको सिक्का लोक नाथालाइ दिए। लोक नाथ कुद्यो र बेलुन किन्ने लाइनमा लाग्यो। एकै छिनमा बेलुन हातमा लिएर लोक नाथ बाउ छेउमै आइपूग्यो। टुहुरो छोरो,ह्यापी मदर्स डेको बलुन हातमा लिएर रमाइरहेको आफ्नो छोरो देखेर भुने अवाक् भए। बेलुन घर गएर खेल्ने है,भुनुले कुरा बुझे जस्तो गरेर लोक नाथलाई भने। यो बेलुन खेल्ने होइन, आज माता तीर्थ औँसी आमालाई दिने हो। आमा आकाशमा हुनुहुन्छ,यो बेलुन आमालाई नै हो,लोक नाथले बेलुन आकासतिर उडायो। हाइड्रोजनले भरियो बेलुन आकास तिर हुंइकिदै थियो,लोक नाथ र भुने आखाले देखिञ्जेल त्यही बेलुन हेरिरहे।
Kasto manai chunne khal ko story mera ta aakha nai rasaye !!
bacchha sano bhaye pani chalakh rayecha. sabai ka aama kaha hunchan ra? nice story.